PUBG Mobile: Ekwuputara Ọchịchị Ọhụrụ Na-abịarute Afọ a | Gam akporosis
PUBG: Ekwuputala steeti ọhụụ ka ọ bụrụ usoro nke PUBG Mobile ama ama, otu n'ime agha royale kachasị egwuri egwu taa na nke ahụ egosila na enwere ike iweta onye na-agba ụta dị elu na ekwentị anyị.
O juru anyị anya, PUBG: New State ga-abụ usoro nke ga-eweta akụkọ na-atọ ụtọ nke ọma na ọkwa nke ị nwere ike ịdebanye aha na mbụ na Playlọ Ahịa Google.
1 Ihe na - aga n'ihu na PUBG Mobile: peeji ndebanye aha gị dị ugbu a
2 Ihe ohuru na usoro 'Battle royale'
3 Futuristic PUBG Mobile nke na-akpọrọ anyị gaa n'afọ 2051 na maapụ ọhụrụ
Ihe na - aga n'ihu na PUBG Mobile: peeji ndebanye aha gị dị ugbu a
KRAFTON Inc taa kwupụtara PUBG: Ọchịchị Ọhụrụ, royale ohuru ohuru nke gha abia na aho na Android na iOS. N'ezie anyị nwere ike ịdebanye aha tupu oge eruo ka anyị nwee ike ị atta ntị na mwepụta ya wee nweta ọkwa mgbe ọ dị; ọ bụ ezie na site na Androidsis anyị ga-elebara anya na nnukwu ọbịbịa a na anyị na-eche ezigbo izu ike.
N'etiti ụfọdụ nke akụkọ PUBG: New State bụ teknụzụ ọkụ ụwa Na na dị ka otu KFRATON Inc na-ekwe nkwa na ọ ga-abụ ọganiihu na ahụmịhe ọhụụ site na mkpanaka na ụdị egwuregwu egwuregwu royale.
Ha na-ekwu maka ya ọ bụghị naanị ọ ga-abụ nnukwu mmelite na anya, ma ọbụna mma graphical kwụsie ike, ya mere mkpa na a agha royale ebe anyị na-eche ihu a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu; Ka anyị nwee olile anya na ha ga-eweta ụfọdụ mgbochi hacker (otu n'ime nsogbu ndị siri ike taa na PUBG Mobile; nke na-aga n'ihu na-enweta ọtụtụ mmelite).
Ihe ohuru na usoro 'Battle royale'
PUBG: Ọchịchị Ọhụrụ ga-eweta ihe ọhụrụ n'ihu nke na-akọwa akụkụ ụfọdụ nke ihe royale agha na ekwentị mkpanaaka. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ndị a ga - abụ ikike ndị egwuregwu ga - eji hazie ọtụtụ ngwa agha iji mepụta ngwa ọgụ n'ime egwuregwu ahụ.
Ma ọ bụ na KRAFTON Inc na-ekwu maka mgbanwe metụtara ọnọdụ ọkụ, ngwa iji grenade launchers na ngwa agha ma ọ bụ mmelite arụmọrụ. Anyị ga-agbakwunye ụfọdụ nkà na ihu agha na nke anyị hụtụrụla n'oge ụfọdụ na PUBG Mobile ka ha si dị drones ndị anyị nwere ike ijikwa mara na ọnọdụ ọnọdụ onye iro na-ahapụghị anyị ka anyị hụ.
Ọzọkwa anyị ga-enwe futuristic ballistic ọta nke ahụ ga - enye ụdị atụmatụ ndị ọzọ ohere mgbe anyị ga - echebe onwe anyị n’aka ndị iro ma ọ bụ chọọ ịbanye n’ụlọ ebe ndị egwuregwu nke ndị otu egwuregwu na - eme ihe ọjọọ.
Futuristic PUBG Mobile nke na-akpọrọ anyị gaa n'afọ 2051 na maapụ ọhụrụ
Hapụ ntakịrị ihe PUBG Mobile bụ taa na oge dị ugbu a, PUBG: New State na-akpọrọ anyị ozugbo afọ 2051 na a Halo karịa futuristic.
Anyị ga-agụta dị ka ọ bụghị maapụ ọhụrụ a kpọrọ TROI. Maapụ nke, dị ka ndị dị ugbu a, ga-enwe isi ihe ga-adọrọ mmasị nke ga-amata nke ọma, yana ụfọdụ ihe ọ ga-ekwe omume ịmekọrịta. Olileanya ebe a na anyị nwere ụdị mmewere iji bibie, ebe ọ bụ na ụlọ ndị dị na PUBG Mobile anaghị agbanwe agbanwe.
El Ebumnuche KRAFTON Inc bụ iji mesie ọtụtụ nde ndị egwuregwu ahụ ike na na oge ụfọdụ agabigala PUBG Mobile iji weghachite ha ahụmịhe ka mma yana nke ahụ na-ewe ntụrụndụ gaa oke dịka ọgụ royale na ekwentị.
Ugbu a, anyị nwere ike ikwu na, ma e wezụga na-ekiri ndị video trailer, ị na-aga site na njikọ n'okpuru ka ịdebanye aha ma si otú ahụ na-aga na-akwado maka PUBG: Ọchịchị Ọhụrụ; na nke ahu gha abanye beta oge na ọnwa ole na ole sochirinụ Nọrọ na-ege ntị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » PUBG: Ekwuputala Ọchịchị Ọhụrụ, Sequel to Popular PUBG Mobile Coming This Year